अरुले के सोच्छन मेरो बारेमा ??? - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
अरुले के सोच्छन मेरो बारेमा ???
( एलेक्स थापा )
अरुले के सोच्छन , के गर्छन होइन मैले के सोच्छु र के गर्छु यो महत्वपुर्ण हो , अरुलाई बदल्न सकिँदैन तर आफू बदलिएर संसारमा एउटा खराब मान्छे भएपनी घटाउन सकिन्छ । मेरो आजको भनाई प्रष्फुटन यसै सन्दरभमा रहेको छ ।
साच्चै भन्न पर्दा हामि अचम्मको छौं ।हामि मान्छेले एकले अर्को ब्यकत्तिलाईनै यति होच्याउछौकि मानब भयर मानबता हराइदिन्छम । अनि हामि आफैपनि यहि कुरालाई मस्तिष्कमा राख्छौ । यस्तो लुगा लगाएर हिँड्छ ? अरुले के भन्लान् ? घरबाहिर यसरी काम गर्नु र ? आफन्तले देखे लाज लाग्दैन ? पैदल हिँडेर कलेज कार्यलय जानु र ? चिन्नेहरुले देख्यो भने के सोच्लान् ? यसपाली चाडपर्वमा धेरै खर्च नगरौं भनेको । तर, छिमेकले के ठान्लान् ? हामी जब कुनैपनि निर्णयक मोडमा हुन्छौं, स्वविवेकले निर्णय गर्न डराउँछौं । कुनैपनि निर्णय लिइरहँदा हामी आफ्नो मनलाई होइन, अरुको आँखालाई सोध्न थाल्छौं । अरुले के भन्लान् ? के सोच्लान् ? भनेर आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न थाल्छौं । जबकी हामीले आफ्नो लागि कुनैपनि काम गर्दैछौं वा निर्णय लिदैछौं भने त्यसमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आफुलाई के सहज लाग्छ, के राम्रो लाग्छ, के ठिक लाग्छ ? सोच्नुपर्छ । जब ‘अरुले के भन्छन् ?’ भनेर हामी डराउन थाल्छौं, हामी आफु चाहिँ अप्ठ्यारोमा फस्न पुग्छौं । अरुलाई हानी पुर्‍याउने, अरुलाई असहज बनाउने, अरुलाई दुःख पुग्ने कुरामा भने सजग हुनैपर्छ । तर, नितान्त आफ्ना लागि लिइने निर्णयहरुमा अरुसँग डराउन वा हच्किनु किन ? अरुले आफ्नो बारेमा के सोच्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । खासमा त हामीले आफुलाई के सोच्छौं ? महत्वपूर्ण कुरा यो हो । हामी को हौ ? के हौ ? आफुले आफ्नै मूल्यांकन गर्नु उत्तम हुन्छ । अरुले आफुलाई कसरी मूल्यांकन गर्छन् भनेर सोच्न थालियो भने हामी आफु जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुँदैनौं । अरुले जस्तो सोच्छन्, त्यस्तै हुने अभ्यासमा लाग्छौं । र, हरेकको सोंच फरक हुन्छ । हरेकले गर्ने मूल्यांकन फरक हुन्छ ।
संसारमा सयथरी मान्छे हुन्छन् । उनीहरुले सोचे जस्तो बन्न थाल्नुभयो भने तपाईंले आफ्नोपन गुमाउनुहुन्छ । त्यसैले हामीले लिने कुनैपनि निर्णयमा आफ्नो मन र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । जस्तो, हाम्रो आयस्रोत सीमित छन् । तर, घरमा कुनै सदस्यको विवाह गर्नुपर्ने भयो । यतिबेला हामीले विवाहको तयारी गर्दा आफ्नो आयश्रोत वा क्रय-क्षमता हेर्दैनौं । बरु, छिमेकी, आफन्त वा फलानोले के भन्छन् ? कसो गर्छन् भनेर सोच्न थाल्छौं । हामीले विवाहको लागि त्यही किसिमको तयारी गर्न सक्नुपर्छ, जो हाम्रो आर्थिक हैसियतले भ्याउँछ । अरुलाई देखाउने वा छिमेकीसँग देखासेखी गर्ने चक्करमा लागियो भने हामी ऋणमा डुब्न सक्छौं । कतिसम्म भने, हामी आफुले कुनै पहिरन लगाइरहँदा पनि सोच्छौं कि अरुले देखेर के भन्लान् ? उक्त पहिरनले आफुलाई कति सहज लागेको छ ? कति सुहाउँदो लागेको छ ? सोच्दैनौं । केवल सोच्छौं, यस्तो लुगा लगाएको देखेर अरुले के सोच्छन् ?
कुनै सानोतिनो उद्यम वा व्यापार गर्न मन लाग्यो । ठेलामा मम बेचेर पनि काइदा कमाई हुन्छ । साँझ वा बिहान एकाध घण्टा ठेलामा मःम बेच्न सकिएला । तर हामी यसकारण डराउँछौं कि, अरुले देखेर के भन्छन् ? कतिपय व्यक्तिहरु सामान्य घरायसी काम गर्न हच्किन्छन् । कुचो लगाउन लजाउँछन् । लुगाफाटो धुन लजाउँछन् । जुठो भाँडा माझ्न लजाउँछन् । किन ? किनभने उनीहरु सोच्छन्, ‘अरुले देख्यो भने के होला ?’ यसरी ‘अरुले के सोच्छन् ?’ भन्ने डरले नै हामी धेरै कुरा लुकाउँछौं । गर्नुपर्ने काम गर्दैर्नौं । अरुको सोचाई अनुरुप आफुलाई बदल्ने यत्नमा बुख्याँचा जस्तै बन्न पुग्छौं । न अरुको चित्त बुझाउन सक्छौं, न आफ्नोपन कायम राख्न नै ।
एउटा यसप्रकारको चित्र छ । एक दम्पती खच्चडमा चढेर कतै गइरहेका छन् । बाटोमा रमितेले देख्छन् र टिप्पणी गर्छन्, ‘कस्ता निर्दयीहरु, एउटा निर्धो जनवारमा दुई-दुई जना चढेका छन् ।’ बटुवाको कुरा सुनेपछि खच्चडमा चढेकी श्रीमती ओर्लन्छन् । श्रीमान् चढेको खच्चडलाई डोहोर्‍याउन थाल्छन् । बाटोमा कसैले देख्छन् र भन्छन्, ‘हेर त, बुढा पनि कस्ता ? आफुचाहिँ आनन्दले खच्चडमा चढेर बुढीलाई हिँडाउने ?’ यस्तो कुरा सुनेपछि श्रीमानले आफ्नी श्रीमतीलाई खच्चडमा चढाउँछन् । र, आफु हिँड्न थाल्छन् । बाटोमा फेरी कसैले उनीहरुमाथि टिप्पणी गर्छन्, ‘कस्ती बुढी ? हेर त बिचरा बुढालाई हिँडाएको ?’ यस्तो सुनेपछि श्रीमती पनि ओर्लन्छन् । उनीहरु दुबै खच्चडलाई डोहोर्‍याउँदै हिँड्छन् । तर, यति गर्दापनि कहाँ अरुको चित्त बुझ्छ र ? बाटोमा मान्छेहरु गिज्याउन थाल्छन्, ‘कस्ता मूर्ख बुढाबुढी ? खच्चड हुँदाहुँदै पनि त्यसमा नचढेर डोहोर्‍याउँदै हिँडिरहेका छन् ।’
अरुले के भन्छन् ? के सोच्छन् भनेर सोही अनुसार गर्न थालियो भने उही दम्पतीको हालत हुन्छ । त्यसैले अरुले के भन्छन्, के सोच्छन् भन्ने कुरा छाड्नुहोस् । तपाईं आफुले के सोच्नुहुन्छ ? मनन गर्नुहोस् । आफ्ना लागि जे सहज, सरल लाग्छ त्यही गर्नुहोस् ।अरुले के भन्छन भनेर नसोच्नुस ।तपाई जेमा जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाई सहि हुनुस !सहि बाटो लिनुस कसैले के भन्ला हैन मैलै के गरिराछु छुट्टयाउनुस ।यसैमा खुसि मिल्ने छ। अबस्था यस्तो छ,बन्दुकको गोलि र मान्छेको मुखको बोलि कहिल्य छेक्न सकिदैन त्यसैले के सोच्छन् भन्ने कुरा छाड्नुहोस्। तपाईं आफुले के सोच्नुहुन्छ तपाईलाइ जे सरल लाग्छ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैमा रमाउनुस।
nepali newsnepali online newsकला - साहित्यकाठमाडौँनेपाली समाचार